एमाले फुटाउन आजै अध्यादेश ल्याउँदैछ देउवा सरकार, यस्तो छ भयङ्कर तयारी ! - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
एमाले फुटाउन आजै अध्यादेश ल्याउँदैछ देउवा सरकार, यस्तो छ भयङ्कर तयारी !
सरकारले नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षलाई विभाजन गर्न मिल्ने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार सरकारले ‘ राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश’ अध्यादेश पहिले नै बनाइसकेको छ ।
आज पनि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ । बैठक चालू भएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भएकाले सरकारले आजभोलि नै बैठक स्थगित गर्ने सम्भावना छ । बैठक चलिरहँदा संसद्मा विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले त्यो झण्झटबाट बच्न सरकारले अध्यादेशको बाटोलाई रोज्न लागेको हो ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बन्ने छ । सरकारले एमाले फुटाइदिएपछि त्यो अध्यादेशलाई फिर्ता लिन पनि सक्छ र अहिलेकै दल विभाजनसम्बन्धी ऐन लागू हुन सक्छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण एमाले यो अवस्थामा पुगेको हो । ओलीले पार्टीमा आफूबाहेक कोही पनि विकल्प छैन भनेर घमण्ड देखाएपछि एमाले विभाजनको संघारमा पुगेको छ ।
ओलीले २०७७ साल वैशाख ८ गते ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश’ ल्याएका थिए । धेरै विरोध भएपछि सरकारले ४ दिनपछि अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै नेपाललाई भेटेर पार्टी फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश ल्याइदिने आश्वासन दिएका थिए । अहिलेको कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाल पक्षलाई आवश्यक संख्या नपुगेकाले पार्टी विभाजन गर्न सजिलो छैन ।
ओलीको दम्भका कारण उनको सरकारसँगै गण्डकी प्रदेश र लुम्विनी प्रदेश सरकार पनि ढलेको छ । नेपाल विभाजन भए १ नम्वर र बागमती प्रदेश सरकार पनि ढल्ने निश्चित छ ।
७ मध्ये ६ वटामा नेकपाको सरकार बनेको थियो, जसमध्ये २ वटामा माओवादीका मुख्यमन्त्री रहेका थिए । ४ वटामै ओलीनिकट मुख्यमन्त्री रहेका थिए र केही अझै पनि छन् । लुम्विनीका मुख्यमन्त्री रहेका शंकर पोखरेलले बुधबार विश्वासको मत लिने कार्यक्रम थियो तर उनले सरकार टिकाउन नसकेपछि राजीनामा दिए । लुम्विनीमा आज बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्म नयाँ सरकार बनाउन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सूचना जारी गरेका छन् ।
अध्यादेशपछि नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी बनाउँछन् र पाँच वटा पार्टीको गठबन्धन कायम रहने छ । उनीहरुले अबको संसदीय निर्वाचनसम्म गठबन्धनलाई टिकाएर लाने र ओलीविरुद्ध अभियान नै चाल्ने जनाइसकेका छन् । अनलाईन मार्ग बाट